संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी ,(रमण घिमिरे )
संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको दुई महाभूकम्प बारे अनुभव, यस सम्बन्धि विचारको बारेमा साहित्यकार रमण घिमिरेसँग गरिएको रोचक कुराकानी प्रस्तुत छ |
सोमवारे औंसीका दिन सातवटा ग्रह एकै ठाउँमा परे के हुन्छ?
'भुखा डकर्मी' भनेको के हो?
नब्बे सालको भूकम्पमा त्यसबेलाको सरकारले कसरी काम गर्यो?
सात सातवटा विश्व सम्पदा एउटै शहर हुने शहरको नाम के हो?
नेपालको कुन शहर घुम्दा विश्वको आधा भ्रमण गरे सरह हुन्छ?